प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लड्छु : डा. गोविन्द केसी – Rastriya Yuvajagaran
Home / राष्ट्रिय / प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लड्छु : डा. गोविन्द केसी
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लड्छु : डा. गोविन्द केसी
सर्वोच्चको आदेशमा डा. केसी पक्राउ
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको दबाबमा सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रा.डा. शशि शर्मा १ फागुन ०७० मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यसयताका ४६ महिनामा ३६ पटक उनको पेसी तोकिएको थियो । तर, ३५ पटक स्थगित सुनुवाइ ३६औँ पटकमा आइतबार सम्पन्न भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले प्रा.डा. शर्मालाई डिनमा पुनर्बहाल गर्न आदेश दिएपछि प्रा.डा. गोविन्द केसी अदालतविरुद्ध प्रतिक्रियामा उत्रिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध बोलेको र न्यायाधीशको अवहेलना गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका देउवाले आफूलाई कुनै जानकारी नगराई पक्राउ गरेको विषयमा आफ्नो असहमति रहेको बताए । ‘मैले केसी पक्राउ परेको समाचार हेरेर थाहा पाएँ । उहाँलाई पक्राउ गर्न जाँदा कसलाई सोधेर प्रहरी गयो ? यसमा मेरो असहमति छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘केसी कुनै अपराधी होइनन्, रातारात पक्राउ गर्नुपर्ने कारण थिएन ।’
अर्जुन अधिकारी, निराजन पौडेल/ नयाँ पत्रिका